အပျော်ကစားနေကြတာလား ” နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » အပျော်ကစားနေကြတာလား ” နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ
အပျော်ကစားနေကြတာလား ” နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ
Posted by etone on Feb 8, 2011 in My Dear Diary | 14 comments
၀င်ရောက်ဆွေးနွေးပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ။
အပျော်ကစားနေကြတာလား ” နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ http://myanmargazette.net/39877/creative-writing/my-dear-diary ပြီးခဲ့တဲ့ တပတ်က ကျမရေးတဲ့ ပို့စ်လေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အထင်လွဲမှူ တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်လာတဲ့အတွက်လည်း ရှင်းပေးတုန်းရှိသေးတယ်..ကမ်းတက်ပြီး ကျမကွိုင်ပတ်ပါတယ် …။ တစ်ကယ်ဆို ကျမပစ်လိုက်တဲ့မြှားက ထိစေချင်တဲ့လူ မထိပဲ (ထိလားမထိလားမသိ သူ့ဘက်က တုံ့ပြန်ချက်မလာ ။ ) ၊ တခြား သွားမှန်တဲ့ ကိစ္စပါပဲ … ။ ရယ်တော့ရယ်ရပါတယ်… ။ တိုက်ဆိုင်မှူတွေ များနေလို့လား … တည့်တည့်ထိတယ်ပဲ ထင်လို့လား မပြောတတ်ပါဘူး… ကာယကံရှင်ပဲ သိပါလိမ့်မယ် ။ ကျမချစ်သူဆီက ဖုန်းခေါ်တော့ ရုတ်တရက်အံ့သြသွားတယ် … မနက်ပိုင်း သူကျမဖုန်းကို ခေါ်လေ့ခေါ်ထမရှိပါဘူး … သူကိုယ်တိုင်ပဲ စက်ရုံ အထိအမြဲပို့ပေးနေကြ။ ရုံးဖုန်းကို ပဲ ခေါ်တာများပါတယ်…အခုမှ ကျမဖုန်းကို ခေါ်တော့ အံ့တော့သြသွားပါတယ်…။ ကျမချစ်သူကပြောတယ် … သူ့ဆီကို အမျိုးသမီးတစ်ယေက်ဖုန်းဆက်တယ် တဲ့… ။ ကျမရဲ့ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေကို ယုံတမ်းစကားပြောပါတယ်တဲ့.. သူကလည်း အပျင်းပြေနားထောင်နေလိုက်ပါတယ်တဲ့… ပြီးတော့ တစ်ဖက်က မိန်းကလေးက ကျမချစ်သူ ပြန်ပြောနေတုန်း ဖုန်းချသွားပါတယ်တဲ့… ။ အဲ့ဒီလိုပြောသံကြားတော့ ကျမခွက်ထိုးခွက်လန် ရယ်မိလိုက်ပါတယ် …။ ရုပ်ရှင်များ ရိုက်နေတာလားပေါ့ … အားလုံးသိပြီးတဲ့ အတိုင်းပါပဲ …ဓါးသွားထက် ကလောင်သွားထက်ပို ထက်တယ်ဆိုတာ ယုံရမလိုတောင်ဖြစ်နေပါပြီ ။ ထိုမိန်းကလေးက ကျမချစ်သူထံဖုန်းဆက်ပြီး … ကျမအကြောင်းတွေ တစ်သီးကြီး ဖွသွားပါတယ်… ။ ကျမအရင်က ဘဲတစ်ယောက်ရှိခဲ့ဖူးတယ်…. သူနဲ့ ဘာညာဘာညာဖြစ်တယ်ပေါ့… ပြီးတော့ သမီးလေးတစ်ယောက်ရလိုက်ပါသေးတယ်တဲ့… ဟိဟိ… ကျမချစ်သူကလည်း နားထောင်နေပါတယ်… ပြီးတော့ကျမက အရမ်းဆိုးတယ်ပေါ့ … ။ အဲ ပြောရရင် ရစရာကို မရှိပါဘူး…။ နားလည်မှူ အပြည့်ရှိပြီး ကျမတို့ ကြားက သံယောဇဉ်တွေကြောင့် ကျမချစ်သူက တစ်ချက်ကလေးမှ ထို မိန်းကလေး ပြောကြားချက်အပေါ် သံသယမရှိခဲ့ဘူးလေ…။ နားပဲထောင်နေလိုက်ခဲ့ပါတယ်…( ရီကောရင်းလည်း လုပ်ထားပေးသေးသတဲ့ ညနေမှ ကျမကို နားထောင်စေမှာပေါ့ … ) နောက်တစ်ခုက ကျမက အခု အထည်ချုပ်စက်ရုံ တစ်ခုမှာ Europe အော်ဒါအတွက် အစဆံး တာဝန်ယူလုပ်ပေးရတဲ့ TTMY ပေါ့..။ ကျမတာဝန်ယူရတဲ့ ဂျာမဏီအော်ဒါက ဂျာမန်သား အဖိုးကြီးတစ်ယောက်နဲ့ အရမ်းခင်ပါတယ် ..။ သူကလည်း သူ့အောဒါတွေဒီမှာချုပ်တော့ ခဏခဏဆိုသလို လာစစ်ဆေးပါတယ် ၊ ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းလည်း လာကြည့်ပါတယ်… ။ လာတိုင်းလည်း လက်ဆောင်တွေ ပေးတတ်ပါတယ်…။ တစ်ခါတစ်ရံ သူ့ ဇနီးလည်း ပါလာတတ်ပါတယ်…။ သူတို့တွေကို ကြည့်ပြီး အရမ်းကြည်နူးဖို့ကောင်းပါတယ် အရာရာကို အေးဆေးပဲ နေတတ်လို့ပါ… ကျမချစ်သူနဲ့ အတူ သူတို့ စုံတွဲ လာလည်တိုင်း အပြင်မှာ ဒင်နာထွက်စားတတ်ပါတယ်… ။ ထွေရာလေးပါးပြောကြတာပေါ့… ကျမချစ်သူအတွက်လည်း လုပ်ငန်းမှာ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ချို့ကို လက်ဆောင်ပေးတတ်ပါသေးတယ် ။ အခု ဖုန်းဆက်တဲ့ မိန်းကလေးကလေ … မဦးမချွတ် ကျမကို အဲ့ဒီ ဂျာမန်ဘိုးတော်ကြီးနဲ့ စွပ်စွဲပါပကော… ။ အဲ့ဒီလူကြီးနဲ့ အတူ သူနေတဲ့ ဟိုတယ်မှာ သွားအိပ်တယ်တဲ့လေ… ရယ်စရာကောင်းလိုက်တာရှင် ကျမကြားကြားချင်း အော်ရယ်လိုက်မိတယ်… ။စိတ်ဓါတ်နိမ့်ကျပုံများ မပြောတတ်တော့ပါဘူး ။ မကြံမစည် အပ်တာတွေပြောတယ် ။ တစ်ချိန်လုံး ကျမက ဒီလို အလုပ်တွေ သဘောမကျလို့ စိတ်ရှိတဲ့ အတိုင်း ပို့စ်တွေ တင်နေတာတောင် ကျမကို ဒီလိုပါတဲ့လား … ။ ကျမချစ်သူသာ သဘောထားသေးသိမ်တဲ့ လူမျိုး ၊ စဉ်းစားဥာဏ်မရင့်သန်တဲ့လူမျိုးသာဆို … ထို မိန်းကလေး ကြပ်တဲ့ အထဲ အိုးစားကွဲပြီပေါ့နော်… ။ အခုဟာက ရယ်စရာဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို ပြောပြနေသလိုပါပဲ ..။ ကျမစဉ်းစားကြည့်တော့ …. ကျမချစ်သူဖုန်းနံပါတ်ကို သိတာ ရုံးက GM ကိုရီးယားလူမျိုးကလွဲရင် တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် …. ။ ဒါဟာဘာကို ရည်ရွယ်တာလဲဆိုတာ စာဖတ်သူသိမှာပါ .. ။ ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကို အတင်းကာရော ငြင်းစရာမလိုဘူး ၊ ရှင်းစရာမလိုပါဘူး… အခု ဒီသတင်းနဲ့ ပတ်သတ်လို့ အတင်းကာရော အသည်းသန်ဖြစ်ပြီး ၊ ကျမကို အကွက်တွေ ဆင် ၊ ချစ်သူနဲ့ ရန်တိုက် ဒါတွေက ကလေးကလား အလုပ်တွေပါ … ။ ထိရောက်မှူ မရှိပါဘူး ။ ဒီအလုပ်တွေလုပ်လို့လည်း ကျမတို့ကြားမှာ ဘာတစ်ခုမှ ဖြစ်လာမှ မဟုတ်တဲ့အပြင် တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက် ပို ပြီးနားလည်မှူ တွေ ရှိလာပါတယ် … လောကမှာ ဖြစ်ပျက်တာတွေက တစ်ယောက်ထဲ ဖြစ်ပျက်နေတယ် မထင်လိုက်ပါနဲ့ … အကျိုးတူ ၊ အကြောင်းတူတွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်… ။ ကိုယ့်ဒေါသကိုယ် မထိန်းနိုင်လို့ ပေါက်ကွဲတော့ ဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲ …ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း အနည်းကျဉ်းထိခိုက်ခံစားရစေမှာပါ …။ ကျမကိုလည်း ကြိုက်တာပြောနိုင်တယ်လေ …. ကိုယ့်နာမည်တပ်ပြီးပြောတာ မဟုတ် ၊ အသားထိပြီးပြောတာမဟုတ်ရင် အေးဆေးပါ … ။ ပြောတဲ့လူသာမောသွားမယ် … ကျမကတော့ မဖြုံဘူး ။ ထိပ်တိုက်လာပြောရင်တော့ ဖဲ့မှာပေါ့ … ။ အဟီး … ဇာတ်လမ်းက မသန်းမဟုတ်သေးဘူး … ကျမချစ်သူကလည်း ကျမဆီ ဖုန်းမခေါ်ခင်ကတည်းက အားလုံး စုံစမ်းပြီးပါပြီ… ။ ထိုမိန်းကလေး ခေါ်သော ဖုန်းနံပါတ် သို့  ပြန်ခေါ်ပါတယ်..။ ဖုန်းဆိုင်တစ်ခုမှ ဆက်သည်ဖြစ်ပြီး…။ထို ဖုန်း ဆိုင်သည် ဘုရင့်နောင် ပွဲရုံ ၊ အောင် သပြေလမ်းတွင် တည်ရှိသည် ။ ဖုန်းခေါ်ဆိုသော မိန်းကလေးမှာ အသားညိုညို ၊ ပိန်ပိန်သွယ်သွယ်ဖြစ်ပြီး ၊ အင်္ကျီ အနီရောင် ၊ ဘောင်းဘီ ဂျင်းပြာတို့ကိုလည်း ၀တ်ဆင်ထားကြောင်း သိရသည် ။ ထိုမှ တဆင့် မိန်းကလေးဧ။် နာမည်ကိုလည်း သိရပြန်သည် …။ ထိုမိန်းကလေးသည် ဘုရင့်နောင် နန်းသဇင် ကုန်စုံဆိုင်တွင် အလုပ်လုပ်သူဟုလည်း သိရသည် ။ ထိုမိန်းကလေး ဖုန်းဆက်သော အချိန်တွင် ကျမချစ်သူ အလုပ်သို့သွားရန် ဘုရားဝတ်ပြီုး ပုတီး စိပ်နေချိန်ဖြစ်ပါတယ်…။ ဖုန်းမကိုင်မချင်း ၊ မြည်နေသဖြင့် ထကိုင်လိုက်ရခြင်းဖြစ်သော်လည်း အပေါစား အရေးမကြီးသော ဖုန်းခေါ်ဆိုမှူ ဖြစ်မှန်း သိခဲ့ရပါတယ် ။ ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကို လိပ်ပတ်လည်အောင် ရှင်းပြပြီးတာနဲ့… မကြာပါဘူး ရှင် ……. မချောက( မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ခုနက မိန်းကလေးကို ဖုန်းဆက်ခိုင်းသူ)ကျမချစ်သူဆီ ဖုန်းဆက်ပါတယ်… ။ မနက်က သူ့သူငယ်ချင်းကို ဖုန်းဆက်ခိုင်းလိုက်တာဖြစ်ကြောင်း ၊ ကျမရေးထားသည်များမှာ သူ့အကြောင်းများဖြစ်ကြောင်း ရိုက်မစစ်ရပဲ ၀န်ခံသွားပါတယ်… ။ ကျမ ချစ်သူလည်း လူချင်းသိနေတော့ လူမှူရေး အရ နားသာထောင်လိုက်ပါတယ်တဲ့ …. ။ ကဲ ကြည့်ပါဦး …လောကမှာ ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေ သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်တတ်တာလား … ။ တခြား လူရော မရှိနိုင်တော့ဘူးလား … ကိုယ့်နာမည် တလုံးမှ မပါတဲ့ ပိုစ်ကြီးကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ငါ့အကြောင်းပါလားလို့ ၀န်ခံတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ … တကယ်ဆို အကြောင်းရာတွေ တိုက်ဆိုင်နေလျှင်တောင်မှ ရေငုံ နှုတ်ပိတ်နေခဲ့သင့်တာလေ(ကျမဘက်က အမြင်) … ။ ကျမတို့တွေ စာရေးတာက ပုံစံအမျိုးမျိုး ရှိပါတယ် ….. စိတ်ကူးယာဉ်ဇာတ်လမ်းတွေလည်း ဖန်တီး တတ်ကြသလို ၊ အဖြစ်အမှန်ပေါ် မှီငြမ်း ကွန့်ပြီးရေးတာ တွေလည်း ရှိပါတယ်… ။ အပျို ၊ အအို ၊ ကလေး ၊ ပိစိကွေး (ညီမငေး ပေးဆေးကွိ မဟုတ်ပါ ) ၊ ဗုစုခရုက စလို့ ချစ်၊ကွဲ၊ညား၊ မုန်း ဇာတ်လမ်းအစုံကို စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးခွင့်ရှိပါတယ်… အဲ့ဒီအပေါ်မှာ ငါက တခုလပ်မို့လို့ တစ်ခုလပ် လို့ပြောတိုင်း ငါ့ရေးပါတယ် ဆိုရင်တော့… တစ်ခုလပ်ဇာတ်လမ်းရေးသူတိုင်းကို ရန်တွေ့ရမလို ဖြစ်နေပါပြီ… ။ ကျမကတော့ အစ တစ်ခု ရလျှင် ရေးချင်စိတ်ပေါက်တိုင်း ထရေးတတ်ပါတယ် ။ အခုလည်း ရေးပါတယ် … နောက်လည်းရေးမှာပါပဲ … ။ တိုက်ဆိုက်မှူ ရှိလျှင်တော့ ဆောရီးပဲလေ
အခုလက်ရှိတစ်ယောက်ထဲပါဟ … သူများလို ပြိုင်တူတွဲပြီး အီကြာကွေးမလုပ်တတ်ဘူး ….။
ပြတ်ပြတ်ပဲ … အဟီး
etone ရေ လောကမှာ ဒီလိုလူမျိူးတွေလဲ အများကြီး၇ှိတက်ပါတယ် ။ သူတို့ကိုယ်နှိုက်က ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် မလုံကြတော တစ်ခါတစ်လေမှာ ဒီလိုမျိုးလေးတွေလဲ ဖြစ်သွားတက်တာပေါ့ ။ ကိုယ်တွေက သဘောထားကြီးတက်တဲ့ သူတွေပဲဟာ ဒီလိုတစ်ခါတစ်လေ မှားကြတဲ့ အမိုက်အမဲလေးတွေကို ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါ …
ဘာနဲ့ ခြစ်တာလဲ ဓါးနဲ့လား ဘောပင်နဲ့လား
ကိုကြောင်ကြီးက ဘယ်သူ့ကို ကုတ်တာလဲ ဟင် .. ကိုကြောင်ကြီးကိုရော ပြန် ကုတ်သလား ..
အနာရော ဖြစ်သွားသေးလား .. ဥုံဖွ
အယ်….. ဘယ်လိုဂျီးလည်းတိဝူးနော်….. အားလုံးကို ရှုပ်နေတာပဲ ( သီချင်းဆိုတာပါ …. )
အီးတုံးမှာလည်း ချစ်တူချိဒယ် ဟုတ်ရား…. နာ့မှာရဲချိပါဒယ် ဟယ်…… နင်ကလည်းကြွားလိုက်တာ ဟွန်း
ဦးကြောင်ဂျီး ချစ်တူက ဒူရဲဟင်…… ချိလည်းမချိဘဲတူများဒွေချိဒိုင်းလိုက်ချိနေတယ်ဟေ့……
post ကတစ်မျိူး ရေးနေတဲ.comment တွေကတစ်မျိုး
etone လိုမိန်းကလေးမပြောနဲ့ erosလိုယောက်ျားလေးတောင် မကျေနပ်ရင် မဟုတ်တမ်းတရားအပြောခံရတယ်။
အဲဒီ တယောက်က etone blog ကိုဖတ်တယ်နဲ့ တူတယ် ။ ရှိတတ်ပါတယ် ။ သူအဲလို လုပ်တော့ အဲဒီ post ကိုပြန်ဖတ်ရတော့တာပေါ့ ။ ဘာရေးထားပါလိမ့်
နောက်ဆက်တွဲက တယ်ဟုတ်ပါလား။ အီးတုံး ချစ်သူနဲက အပြန်အလှန် နားလည်မှု ရှိနေမယ် ဆိုရင် အသေးအမွား ကိစ္စတွေ စိတ်ထဲ မထားပါနဲ့.. စိတ်တို စိတ်ဆိုးရတာ ပင်ပန်းပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး နေလိုက်ပါ။
ဒါမျိုးတွေက ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မိန်းကလေး ယောက်ျားလေးမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ခုခေတ်ကလည်း မိန်းမ ယောက်ျား ခွဲနေရတဲ့ ခေတ်မဟုတ်တော့ဘူး။ စိတ်ဓာတ်နိမ့်ကျတတ်တဲ့ လူတွေက မိန်းမ ယောက်ျား မရွေး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကိုယ်မဖြစ်ရအောင် နေတတ်ဖို့ပဲ လိုတာပါ သူငယ်ချင်း
အိုးမလုံ အုံပွင့်မို့လို့ လွှတ်ထားလိုက်ပါ၊ သည်းခံ သည်းခံ သည်းခံခြင်းသည် အောင်မြင်ခြင်း တစ်ပါးတဲ့ မအိရေ…….။ ကျွန်တော်ကတော့ ချစ်သူမရှိလို့ ဒါဘဲပြောတတ်တယ်။ ကြေငြာ မဟုတ် ….
ကြံကြံဖန်ဖန်လုပ်ကြံပြောတတ်တဲ့သူများ .. တယ်လည်း ချီးကျူးစရာကောင်းပါပေတရ် …
မင်းအုပ်စိုးရဲ. သရပါမဂ္ဂဇင်းမှာ ပင်တိုင်စာရေးဆရာမတောင်လုပ်လို.ရတရ်။
ဘယ်သူလဲမသိဘူး … စပ်စုချင်လိုက်တာ … အဟီးးး
အီးတုံးရေ … Gtalk မှာပြောပြနော်။